खाद्य व्यवस्था तथा कम्पनीको गोदाममा २ बर्ष अघि उत्पादन भएको चामल बरामद – Sajha Pati
खाद्य व्यवस्था तथा कम्पनीको गोदाममा २ बर्ष अघि उत्पादन भएको चामल बरामद
काठमाडौं । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको गोदाममा सन् २०१८ उत्पादन मिति भएको जापानीज चामल भेटिएको छ । आज महानगरको उपभोक्ता हित संरक्षण समितिको अनुगमन टोली पुग्दा कम्पनीले यो चामल बिक्री गरिरहेको थियो । चामलका बोरामध्ये केहीमा उत्पादन मिति देखिन्छ । केहीमा २०१९ देखिन्छ । अधिकांशमा यस प्रकारको लेवल छैन । कम्पनीका बरिष्ट लेखा अधिकृत नरनाथ अधिकारीकाअनुसार यो चामल जापान सरकारले खाद्य सहयोगका रुपमा उपलब्ध गराएको चामल हो । गएको पुष महिनामा यो चामल प्राप्त भएको थियो ।
खाद्य बस्तु कुनैमा लेवल देखिएन त? प्रश्नको जवाफमा कम्पनीका गुणस्तर अधिकृत दीपा लामिछाने भन्नुहुन्छ — हामी लेवल राख्ने चरणमा छौं । ढिलो चाँडो लेवल राख्छौं । यो सरकारका निकायको गम्भीर लापरबाही हो । उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सेना भन्नुहुन्छ — निजी क्षेललाई गुणस्तर कायम भएन भनेर कारवाही गर्ने सरकारले चाहिँ जे पायो त्यही गर्न कहाँ मिल्छ र ? अनुगमन टोली पुगेका बेला कम्पनीका प्रादेशिक प्रमुख पवित्र गौत्तम कार्यालय बाहिर हुनुहुन्थ्यो ।
२४ घण्टामा उपत्यकामा थप १४ सय १६ जना कोरोना संक्रमित
होटल रेड डाइमण्डमा बसेर नक्कली मह बनाउँदै, ८ सय रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बिक्री गर्ने गरेको स्थानीयको भनाइ